🥇 ▷ Jiilka Miele 7000, qalabka guryaha ee smart ✅
Jiilka Miele 7000, qalabka guryaha ee smart
Qalabka qalabku ma sii jiri jirin. In yar si ka sii yar ayaa ay u sii fiicnaanayaan. Waxaa jira waxsoosaarayaal badan oo bilaabay nidaamyadooda si ay u dhexgalaan dhammaan qalabka guryaha. Samsung waxay leedahay nidaamka SmartThings, halka LG-ka loo yaqaan ThinQ. Hagaag, hadda mid ka mid ah soosaarayaasha alaabada ugu muhiimsan ee soo saarta qalabka ayaa ka faa iidaystay IFA si ay noo tusto qorshayadooda. Waxaan ka hadleynaa kuwa cusub Miele 7000 jiil, kaas oo la yimaada dhammaan noocyada qalabka ku xiran.
Qalabka loo yaqaan ‘Miele Generation 7000’ waxaa lagu qalabeeyay codka codka iyo dhaqdhaqaaqa,
kaamirooyinka kormeeraya habka karinta iyo kaaliyeyaasha dhijitaalka ah ee u oggolaanaya in kabadan 1,200 in lagu xiro
cuntada sida, astaamaha kale. Dhamaantood Waxay leeyihiin mobilo isku-dhafan oo WiFi ah oo u oggolaanaya howlo cusub oo raaxo leh iyada oo loo marayo xiriir la leh barnaamijka Miele Mobile. Waxaan si fiican u ogaan doonnaa qalabka cusub ee soo saarahaan caan ah.
Makiinada dharka lagu dhaqo iyo foornooyinka
Waxyaabaha cusub ee ay soo bandhigtay Miele waxaan leenahay makiinada dharka lagu dhaqo ee loo yaqaan ‘AutoDos’, oo ah habka maydhida isukeenista Waxaa lagu bilaabi karaa meel fog iyadoo la adeegsanaayo arjiga. Waxay kaloo leedahay Waxqabadka AutoStart, kaas oo kuu oggolaanaya inaad barnaamij ku maydho makiinada weelka wakhtiga loo baahan yahay. Ka sokow, the Shaqada ShopConn @ ct Waxaan ogeysiinaynaa taleefanka gacanta marka meelaynta saabuunta PowerDisk ay dhamaaneyso, sidoo kale ay kujirto ikhtiyaarka in amarka lagu dhigo dukaanka.
The foornooyinka TasteControl cusub Waxaa ka mid ah nidaam gala ficil ayagoo ogaanaya kuleylka xad dhaafka ah isla markaana si toos ah u qaboojiya gudaha foornada dhexdeeda, ka horjoogsashada cuntada inay qalajiso ama xad dhaafto. Iyaguna way leeyihiin MotionReact, teknolojiyad ogaanshaha dhaqdhaqaaqa kaas oo wax ka beddelaya qaabka hawlgalka uun marka la soo dhowaado. Tusaale ahaan, firfircoonida iftiinka gudaha ama kaxar sicirka acoustic dhamaadka barnaamijka.
Hawl kale oo cusub ayaa ah Rajada Cunnada, oo ah kamarad gudaha foornada ka dhexaysa sawirro ku jira High HD una diraa mobilada. Tani waxay naga caawin doontaa inaan helno natiijada karinta ugu wanaagsan. Intaa waxaa dheer, the Nidaamka DualSteam, oo ay weheliso faallooyinka TasteControl, waxay ka hortagtaa cabitaanka xad dhaafka waxayna bixisaa nidaam uumi kara.
Taargooyinka Agabka Lagu Caawiyo
Sidoo kale inay naga caawiso inaan wax karno Generation 7000 ee Miele waxaa ku jira taargooyin wax lagu kariyo oo cusub. Kuwani waa kuwo la jaan qaadaya dalabka CookAssist, oo ah kaaliyaha cuntada karinta dhijitaalka ah ee nagu hagi doona isticmaalka taargooyinka.
Intaa waxaa sii dheer, kuwani waxay ku qalabaysan yihiin Shaqada TempControl, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku diyaarisid cuntada sida ugu habboon meesha loo kariyo. Waxaan si fudud ugu ridi hilibka digsiga oo marka dareemayaasha isku dhafan ee saxanka ay ogaadaan inay gaareen darajadii lagu soo bandhigay dalabka, waxay si muuqata oo muuqata uga digayaan saxanka iyo moobiilka.
Inta lagu guda jiro jiilka 7000 ee Miele waxaan sidoo kale ka helnaa taarikada cusub ee la-gelinta. Kuwani waxay u oggolaadaan inay dhigaan oo ku dhaqaaqaan illaa lix dheri, digsiyada ama mooteelka. Waxaas oo dhan waxaa mahad leh nidaamka dheriga caqliga leh ee soo ogaanaya nooca maacuunta la isticmaalay.
Sida laga soo xigtay soo saaraha, ku dhawaad ​​seddex meelood meel iibsadayaasha nadiifiyeyaasha faakiradda ah ee Yurub waxay door bidaan moodel dib loo isticmaali karo. Markaa Miele wuxuu ka faa’iidaystay IFA inuu soo bandhigo noocyadeeda cusub ee moodooyinka vacomka madhan.
Midka cusub Taxanaha Miele TriFlex HX1 Waxay bixisaa waxqabadka nuugida heer sare ah iyo dabacsanaan weyn. Waxaa jira saddex moodal oo la heli karo, oo leh shan midabo oo kala duwan. Waxay leeyihiin qaar ka mid ah farsamooyinka cusub, sida fikradda 3-in-1, farsamada Twist2open si loo fududeeyo faaruqinta weelka qashinka iyo madaxa ciidda Iftiimin ifaya.
Mashiinka dharka lagu dhaqo iyo mashiinnada qalajinta
Waxaan sidoo kale haynaa war ku saabsan daryeelka dharka. Moodooyinka cusub ee lahaanshaha Miele 7000 Generation waxay la jaan qaadayaan barnaamijka Miele Mobile. Way ku mahadsan tahay iyada waxaan ogaan doonnaa, tusaale ahaan, goormaynu dharka ku dari karnaa barnaamij horey u bilownay (AddLoad).
Dhanka kale, dhaqangelinta iyo wareejinta wareegga si aad ah ayaan u saameyneynin waxqabadka ama daryeelka dharka. Hada dhaq dhaqeyaha iyo qallajiyaha ayaa awood u leh in ay ku wada xiriiraan shabakada WiFi ee guriga u gaarka ah, sidaas darteedna ay awood u yeeshaan in ay wax walba ku xirnaadaan dhibaatooyin la’aan.
Qaxwe sameeyaha iyo gambaleelka qurxinta
Inta lagu guda jiro taxanaha Jiilka 7000 ee Miele waxaan sidoo kale leenahay dawanno iyo kafee kafee. Marka hore, mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn waa Aura 4.0 Ambient. Waxay ku saabsan tahay koofiyad u eg muuqaal laambad qaabeed ah. Ka sokow qurxinta jikada, qalabku wuxuu siinayaa iftiin isku dhafan oo midabyo kala duwan leh oo aan xakamayn karno, oo ay weheliso udgoon ay ku jirto qaybteeda kore. Iminka soo-saaraha ayaa bixiya udgoon ay soo saarto udgoonnada ay ka helaan shirkadda Provence.
Iyo si loo dhammeystiro dejinta aaladaha jiilka 7000 ee Miele waxaan haysannaa Mashiinka qaxwaha ah ee CM5500. Waxay ku qalabeysan tahay Kaaliyaha Barista, kaas oo ka caawiya sidii loo gaari lahaa hadhuudhka ugu fiican iyo isku-habeynta mashiinka ugu habboon.
Warar kale oo ku saabsan… aaladaha…